ဝိဉာဉ်ဖမ်းသော ပြဇာတ် – Grab Love Story
သစ်ကိုင်းခြောက်များသည် ညိုးရိနွမ်းပါးလာသည့် သစ်ရွက်အိုများကို ထိန်းမထားနိုင်တော့။တလွင့်လွင့် ဆင်းသက်လာသည့် သစ်ရွက်ခြောက်ကလေးအား
“ဖြတ်”ခနဲ ဖမ်းပြီး ကလေးတစ်ယောက်လိုမြူးတူးခုန်ပေါက်နေသည့် ချစ်ရသူ။
နှစ်လိုဖွယ်ရာအပြုံးနှင့် ပါးချိုင့်ကလေး တစ္ခုသာရှိသည့် ချစ်သူ့မျက်နှာက အပြစ်ကင်းစင်လှပသည်။
ဟန်မင်းထက်၏ နဖူးမွ ချွေးစီးများပင်ဆို့နေသည်။ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်၊ ပေါတောတောနှင့်ကေလးသာသာ နေသော အိသင်ဇာကိုချစ်သူအဖြစ်တော်ထားရတာ ပျော်ရသလိုတခါတခါ ဂွတီးဂွကျနိုင်လွန်းသည်။အခုလည်းကြည့် ချစ်ခင်ကြည်နူးဖို့ လူပြတ်တဲ့နေရာလေးခေါ်ပါတယ်ဆိုမှ သစ်ရွက်ကြွေဖမ်းမယ်ဆိုလို့ ကိုယ်ကထိုင်နေရတယ်။ ခက်တော့လည်းခက်သည်။
သူကစားလို့မောသွားတေ့ာ ရေဘူးပေးဆိုပြီး ရေဘူးကို ဂလွတ်ဂလွတ်နဲ့ မော့သောက်၊ပြီးတော့လည်း ဟန်မင်းထက်ပေါင်ပေါ် ကေလးပေါက်စလို လှဲအိပ်နေသည်။ ဒီလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ချာတိတ်မလေးကို တခြားစိတ်တွေဝင်ပေမယ့် မထိရက်မကိုင်ရက် ဖြစ်နေရတာကြာပေါ့။.
ချစ်သူရဲ့ ချွေးစလေးတွေနဲ့ ရေမွှေးနုနုပေါင်းစပ်ပြီး ထြက္လာတဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ဟာ ဟန်မင်းထက်နှာခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာတာပဲ။
ခွေခွေလေးလှဲအိပ်နေတဲ့ ချစ်သူရဲ့ တင်ပါးလေးခပ်လုံးလုံးကို မြင်တော့ တံတွေးမြိုချရင်းအောက်က ဖွားဘက်တော်က တင်းခနဲဖြစ်သွားတာပေါ့။အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဝတ်ထားလို့ အရမ်းမဆိုးပေမယ့်အဲ့နေရာကြီးဖောင်းထလာတော့ ခေါင်းအုံးအိပ်နေတဲ့ အိသင်ဇာက သိတာပါပဲ။ ဒီမွာပဲမပြောမဆိုနဲ့ ငေါက်ခနဲ ထ ထိုင်ရင်း
“. .ထ…ကိုကြီး ထ…ပြန်ကြမယ်..” တဲ့။
“ခနေနဦး နေပူတယ် ငါးမိနစ်လောက်
ဟန်မင်းက ပြောပြောဆိုဆို သူ့ငပဲသူ
ဆိုပြီး ရစ်ပါလေရော။ရစ်ရုံနဲ့မကျေနပ်နိုင်ဘူး နှုတ်ခမ်းကြီးထော်ပြီးစိတ်ကောက်နေလို့ တလမ်းလုံး ချော့ရသေး။
ချစ်သူကလည်း ရေခဲမုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းစိတ်ကောက်ပြေသွားရော။အဲ့လိုပါဆို ဂွတီးဂွကျလေး။
အထိပဲလမ်းကတူတယ်။အိသင်ဇာကလည်းအဲ့အထိပဲလိုက်ပို့ခိုင်းတယ်။ သူနေတဲ့လှိုင်သာယာကိုလိုက်မပို့ခိုင်းဘူး။ ဟန်မင်းထက်ကတော့ဆယ်မိုင်ဖက်ကို ကားစီးပြန်တာပေါ့အိသင်ဇာတစ်ယောက် ဘတ်စ်ကားစောင့်နေတုန်း
တက္ကစီသမားရဲ့ ဖော်ဖော်ရွေရွေနှုတ်ဆက်သံကအိရဲ့ နားထဲကိုသံရည်ပူလောင်းချလိုက်သလိုပဲ။အတတ်နိုင်ဆုံးပြုံးပြီး
အတင်းတံခါးဖွင့်ပေးတော့ အားနာတာရယ်ဘေးလူတွေသတိထားမိလို့ မျက်နှာပူတာရယ်နဲ့တက်လိုက်မိသည်။
“ခုနက သော်တာ့ ကောင်လေးလား.။
“သော်တာ..အလုပ်လုပ်သေးလား။အကိုလည်းညဖက်မဆွဲဖြစ်တာကြာပြီ။ လှိုင်သာယာဖက်ကညဖက်ဆိုအန္တရာယ်များတယ်လေ။ ဒီရက်ပိုင်းမိန်းမ မီးဖွားဖို့ရှိတာနဲ့ ညဖက်ပြန်ဆွဲမလားလို့။
တက္ကစီသမားက စကားပြောရင်း ဘေးကနေအရှိန်နဲ့မောင်းတက်သွားသော အောက်ဆိုဒ်ကားကို ဆဲပါလေသည်။
“အဲ့ အောက်ဆိုဒ်ကားတွေ အရမ်းလူပါးဝတာ။တရားဝင်မဟုတ်တော့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတာ။ရဲတွေလည်းမဖမ်းဘူးဆိုတော့ခက်တာပါပဲ။
အဲ ခုနကမေးတာလည်းဖြေပါဦး။ သော်တာအလုပ်လုပ်သေးလား။”
“မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီ….တစ်နှစ်တော့ကျော်ပြီ။အိမ်မှာက အမေကဆေးရုံကလည်းဆင်းလို့သက်သာနေပြီလေ။ အရိုးအကြောဆိုတော့အတော်ကုလိုက်ရတယ်။ သမီးတို့ညီအမသာ
မကြိုးစားရင် မလွယ်ပါဘူး အကိုရယ်။ ခုတော့အလုပ်အိုဗာတိုင်ဆင်းရင်း အကြွေးလေးတွေဖဲ့ဆပ်နေရတယ်။ ပြန်လုပ်ဖို့စဉ်းစားမိပါသေးတယ်။ ကောင်လေးကိုလည်းအားနာလို့ ပြီးတော့အဲ့ငွေတွေလဲ သုံးရမှာစိတ်မသန့်ဘူး။”
“ဟုတ်တာလည်းဟုတ်တယ် သော်တာရေ။အကိုတို့လည်း ဒီငွေတွေယူရတာစိတ်တော့မသန့်ဘူး။ဒါပေမယ့်လည်းကွာ တခုမဟုတ်တခုတော့ရင်းရတာပဲမလား။ သင်္ဘောတက်ရင်အသက်ရင်းရတယ်။ မိသားစုနဲ့ပစ်ပြီးနေရတယ်။
ကြီးပွားချင်တော့ ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးလုပ်ကြတာပဲမလား။ သော်တာလေးမပြောပါနဲ့ အကိုတိုတေ့ာင် လူတွေက လိုတုန်းသာ မလိုရင်
စောက်ပြစ်ပြောစောက်တင်းတုတ်ကြတာကွ၊ဒါတောင် သော်တာတို့ဆီက ဖြတ်မစားဘူးနော်။
အကိုတို့လည်း နာမည်တွေ သိက္ခာတွေရင်းရတာပါပဲကွာ။ စိတ်ဓာတ်တော့မကျနဲ့။စိတ်လည်းမညစ်နဲ့ ကိုယ်တို့မှာက ရင်းစရာဆိုတော့ ဒါတွေပဲရှိတာမလား။ သူများတွေလိုသိန်းတစ်ရာ တစ်ထောင်မှမရင်းနိုင်တာ။
အို..ဆယ်သိန်းတောင် ကိုင်မသုံးဖူးပါကွာ။ဒီဆင်းရဲတွင်းထဲက ထွက်ဖို့နေနေသာအသက်ရှင်ဖို့ကိုတောင် မနည်းရုန်းကန်နေရတာ။…ဟူး…”
တက်ကစီသမားက တရစပ် မရပ်မနား
စကားအရှည်ကြီးပြောရင်းသက်ပြင်းရှည်ကြီးချတော့ အိလည်း ဟူးခနဲ့ သက်ပြင်းချကာစဉ်းစားမိနေသည်။
သူပြောတာလည်းဟုတ်တယ်။ အကြွေးတွေ၊အိမ္လခ ရေဖိုးမီးဖိုး၊ အမေသာတခုခုထပ်ဖြစ်ရင်ပေါင်စရာနှံစရာမရှိတော့ဘူး။ အခုစက်ရုံကလည်း ထမင်းနပ်မှန်ရုံသာသာပဲ။စုထားဆောင်းထားတာ
ရှိဖို့နေနေသာ အေမ အရင်ဆေးရုံတက်တုန်းကအကြွေးတောင်မကြေသေး။ သိန်းသုံးဆယ်ကျော် ကျန်သေးသည်။ ညီအမနှစ်ယောက် ဟိုဆွဲဒိီဆွဲနဲ့ ဆွဲထားကြတာ။ ဒါတောင် နှစ်ယောက်သား ရရာနည်းနဲ့ ပိုက်ဆံရှာကြလို့ မဟုတ်ရင်
“သော်တာရေ..ရောက်ပြီ အကိုအိမ်ယာရှေ့မှာပဲချပေးမယ်နော်။ ကားလမ်းက ပြင်နေတော့
ပြောပြောဆိုဆို တံခါးဖွင့်ပေးရင်း နှုတ်ဆက်မှအိသင်ဇာလည်း အသိပြန်ဝင်လာသည်။ဟူး….ခက်လိုက်တာကွယ်။ အပြန်လမ်းကျမွ
နေက ပိုပူနေသည်ထင်ရတာပဲ။ ခြေလှမ်းတွေနှေးကွေးလေးလံပြီး ပစ်လှဲချင်စိတ်ကိုအားတင်းအိမ်ကိုအမြန်လျောက်လာခဲ့မိသည်။ ။
ရယ်မောနောက်ပြောင်သံတွေ ကားဟွန်းသံတွေကို နောက်ခံတေးလိုဖွင့်ဆိုပြီး နေမင်းကြီးက
ခပ်ရွံ့ ရွံ့ လေး ပုန်းခိုနေလေပြီ။
အေးမြနောက်ကျိသော တွင်းရေကို ဂရုတစိုက်
သေချာတိုက်၊ လမ်းသွားလမ်းလာကို ဂရုမစိုက်အားပဲ ခပ်မြန်မြန် ခပ်သွက်သွက် အရွက္ကို
သူ့ကို ပြသနာရှာဖို့နေနေသာ သူ့အကြွေးနဲ့
ကင်းတဲ့သူက ဒီရပ်ကွက်ထဲ ခပ်ရှားရှား။
ရပ်ကွက်ဆိုပေမယ့် အကုန္လုံးက ကျူးကျော်၊
“ဗီရိုပေါ်က ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ငွေနှစ်သောင်း
ထုတ်ပါဦး အေမရ။ ဒေါ်မြင့်ကြီးလာနေပြီ။”
အိသင်ဇာ ရေချိုးရင်း လှမ်းအော်ပြောသည်ကို
“အေး..အေး” ဟုပြောရင်း အ​မေက
“အို အမရယ် ခါကသက်သာသေးတာလည်း
မဟုတ်ပဲ ။ ကလေးတွေခိုင်းရောပေါ့။”
“ရပါတယ်အေ။ ပြောမနေပါနဲ့ သက်သာနေပါပြီ”
“ဒါဖြင့် ကျမသွားတော့မယ်နော် အမ။ သတိထားဦး ထပ်ဖြစ်နေဦးမယ်။ နလင်ကျော်လေး
ငွေရတော့ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ နှုတ်ဆက်ကာထွက်သွားသည်။ ငွေသာမပေးနိုင်လို့ကတော့
မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ခံရခက်အောင် ပိုးစိုးပက်စက်ပြောမှာ
အိမ်လခအပြင် အကြွေးက သုံးသိန်းပေးဖို့ရှိသေးသည်။ အိမ်လခပုံမှန်ပေးနိုင်ပေမယ့် အကြွေးကတော့ ငါးရက်ခြားတစ်ခါ နှစ်သောင်းနှစ်သောင်းနဲ့
ရေမိုးချိုးပြီးတော့ သနပ်ခါးလေးလူးညစာချက်ဖို့ ဆန်လေးပြေးဝယ်၊ ထမင်းအိုးတည်
ဝယ်ပြီး ထောင်းရောင်းသည်လေ။သူဌေးမဖြစ်ပေမယ့် ကွမ်းဖိုးဆေးဖိုးလေးတော့ ရောင်းရတာပဲ။
ညရှစ်နာရီထိုးပြီ အမကပြန်မလာသေး။ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ အလုပ်မှာပဲအိပ်တော့မယ်တဲ့။ ဒီလောက်ဆို အိသင်ဇာသိသည်။
အမအလုပ်ပြန်လုပ်နေပြီ။ အ​မေတာ့ သမီးကို
လမ်းမကြီးက လူမပြတ်။ ညကိုးနာရီဆိုတာ
ဒီရက်ကွက်ထဲ ဆိုင်ကယ်တချို့ လူတချို့
ပုရိသတို့ကတော့ မနက်ဖြန်အတွက် အားဆေး၊
မိန်းမတွေကလည်း ဒီအချိန်ဆို အိမ်ရှေ့ကို
အမေကတာ့ အိမ်ရှေ့မှာ ခုံလေးချ
ခြင်ဘတ်တံ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ ပြန်မလာတဲ့
သမီးကို မျှော်ရင်း အတွေးနယ်ချဲ့။ အိမ်ပေါ်က
အိသင်ဇာကလည်း ဖုန်းထဲက တက္ကစီသမားရဲ့
နံပါတ်ကိုကြည့်ရင်း ဝေခွဲရခက် ဆုံးဖြတ်နေဆဲ။
လောကကြီးက ဆူညံသလောက် သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်နေတော့တာပဲ။
“အေးပါဟယ် အပြင်မှာက အေးလို့ပါ။”
“ငါအေမပါဟ သိပါတယ်။ နင်တို့ဟာလေ
ဇောင်ဇောင့်နဲ့တက်လာပြီး ဝါးထားသော ကွမ်းကို ပလုပ်ကျင်းပြီး အိမ်တံခါးကိုပိတ်။
ဘုရားရှိခိုးလို့ တတွတ် တွတ်နဲ့ဆုတောင်းနေတာ သမီးဖြစ်သူအတွက်ဆိုတာ ကြမ်းတပြေးထဲ
အိပ်နေသော အိသင်ဇာ ကြားနေရတော့
ပေါက်လွှတ်ပဲစား စာရေးဆရာ ဒုန့်လပ်ဗ်မီ
(ခေါ်)မချစ်ရ ဆိုတဲ့သူရဲ့ စကားက အိရဲ့
နားထဲမွာ ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။ ဆိုးတာက
သူ့ကို ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ထဲကမွ ဆိုးရွားတဲ့
အတွေ့အကြုံတွေကို ခုထိ မမေ့နိုင်သေး။
မညှာမတာ တရစပ်ဝင်ဆောင့်နေသော လိင်တံ၊
မျက်နှာတွေ၊ သိသိကြီးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း
စိတ်လိုလက်ရ တင်ပါးဆုံ ကောကော့ပြီး
အငမ်းမရဖြစ်ခဲ့ပုံတွေ၊ အမွှေးတွေနဲ့ လဥကြီးနှစ်လုံးကို အတင်းအကြပ်စေခိုင်းမှုကြောင့်
တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်း ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလို
အိပ်ခါနီးတိုင်း ပေါ်လာသည်။ ပေါ်လာတိုင်းလဲ
ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ချလိုက်မိသည်။
“ကိုကြီး သမီးတို့ အဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲ
ပြီးတော့ ဖုန်းကိုပိတ်ကာ အိပ်လိုက်ပါတော့သည်။ အိပ်မက် မက်တော့ အထူးအဆန်း၊
မညှာမတာ လိုးဆောင့်နေမှုကို ခံနေရသည်တဲ့။
တအားအား အော်ကာ ငရဲအလားခံနေရသည်တဲ့။
အိပ်မက်ကနိုးတော့ မနက် လေးနာရီ။
ဖုန်းလေးကို ဖွင့်တော့ အမေကအိပ်နေတုန်း။
ဖုန်းမီးလေးကို အသုံးပြုကာ ခြေသံဖွဖွနင်းရင်း
ကားယားခွထိုင်ရင်း အစိလေးကို လက်သုံးချောင်းနဲ့ ပွတ်နေမိသည်။ လူခြေတိတ်ချိန်ဆိုတော့
အိမ်သာတံခါးချက်မချထားမိ။ တဖြွတ်ဖြွတ်နဲ့ပွတ်နေတဲ့အသံက ဘေးအိမ်ကကြားချင်ကြားမှာ။
ဒါတွေကို ဂရုမစိုက်မိ၊ အိစိတ်ထဲ အရမ်းတောက်လောင်နေတဲ့ ကာမမီး
ကံဆိုးချင်တော့ ဘေးအိမ်က ကိုဝင်းထွန်း တရေးနိုး တာနဲ့သွားကြုံတာပဲ။ ခြံတွေက
ခြံစည်းရိုးလည်းမရှိဘူး။ အိမ်သာဆိုတာကလည်း မြစ်ကိုကျောပေးတည်ထားတာလေ။ဟိုဖက်ဒီဖက်က ခြေလှမ်းကျဲကျဲသုံးလှမ်းဆိုရောက်နေတာ။ အရုဏ်ဦးအလင်းရောင်အောက်မှာ ဖုန်းလေးကို ဘယ်လက်နဲ့ကိုင်ရင်း မက်စိလေးစင်းပြီးညာလက္က အားပါးတရ ပွတ်နေတဲ့ အိသင်ဇာကို ဟနေတဲ့တံခါးကြားက
တွေ့ရတော့ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲသလို ဖြစ်တာပဲ။
ဒီတော့ သူ့ဖုန်းကိုထုတ်ပြိး ခြေသံလုံလုံနင်းရင်း
ဖြဲကားပြီး ဇိမ်ယူနေတဲ့ အိလည်း ကြာကြာမခံဘူး။ ဖင်ကြီးကော့ကော့ပြီး အ..အ..အနဲ့
ပြီးသွားတယ်။ ဗီဒီယိုကလည်း အဲ့အထိပါ
ရိုက်လိုက်ရတယ်။ ပြီးတာနဲ့သူလဲ လစ်တာပေါ့၊
အိမ်ပေါ်မှာခဏလှဲပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ဒီအလုပ်ပြန်လုပ်တော့မယ်ပေါ့။ ။
အများကြီးမှ တကယ့်အများကြီး။ အဲ့ထဲကမွ
လက်ကလေးလှမ်းပြပြီး နှုတ်ဆက်တယ်။အသာအယာ ခပ်သုတ်သုတ်ကလေး သွားရင်းကားပေါ်ရောက်တော့ ကားသမားကလည်းမောင်းသွားသည်။
“ဟုတ်ကိုကြီး။ တစ္နာရီ နှစ်သောင်းခွဲ။”
တစ္နာရီ ငါးထောင်ဆိုပြိး အသည်းသန်တွေ
လုပ်ကြတာ့ ခေတ်ပျက်နေပြီ။ ဖောက်သည်ဟောင်းတွေကိုတော့ပြောထားပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ကိုကြီးစိုက်ပေးမယ်။ နောက်နေ့အတွက်
“အာ..ကိုကြီးကလည်း..မဟုတ္တာ။ ငါးထောငိတော့ မလုပ်ပါဘူး။ပြီးတော့ ကိုကြီးစိုက်ပေးစရာလည်းမလိုပါဘူး။”
“မဟုတ်ဘူးလေးကွာ။ တစ်သောင်းခွဲလောက်တောင်းခိုင်းတာ။ ငါ့ညီမ​လေးက ငါးထောင်အစားမှမဟုတ်တာ။ပြီးတော့ ကိုကြိးကလည်းအလကားမ​ပေးပါဘူး။ ဒီည​တော့အသစ်ကလေးကို ကိုကြီးသုံးချင်လို့ပါ ဟဲဟဲ။”
“အမေလး…ငါ့ကိုကြီးကတော့လေ။ သ​ဘော သ​ဘော။ နှစ်သောင်းခွဲမပေးနဲ့ နှစ်သောင်းပဲပေး။”
“တကယ် တကယ်။ ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်ပဲကို”
အခန်းထဲ ရောက်တော့ နှစ်ယောက်သား
သူကေတာ့ ရေချိုးခန်းထဲမှာ စိမ်ပြေနပြေရေချိုးပြီး ထြက္လာတာ အဝတ်တောင်မကပ်ဘူး။
ရောက်ရောက်ချင်း အိကို တံဘတ်ချွတ်ခိုင်းတယ်။ အိလည်းချွတ်ပေးပြီး လှဲမယ်အလုပ်
တဖြည်းဖြည်းသူ့ လီးက တောင်လာတယ်။
တတ်သမ်ွ အကုန်သုံးပြီး စုပ်ပေးလိုက်တယ်။
လျာနဲ့ကလိတယ် အာခေါင်ထိ ထိုးထည့်ပေးတယ်။ အို..လဥပါစုပ်ပေးတယ်။ ဒါလည်းသူကမပြီးဘူး။ ဆယ်မိနစ်လောက်စုပ်ပေးပြီတော့ လီးက
တံတွေးတွေနဲ့စိုရွှဲနေပြီ။ ဒီတော့မှ ပြောတယ်။
“သော်တာလေး ကုတင်ပေါ် ကျောခင်းလိုက်။”
အိ…ကုတင်ပေါ်ကျောခင်းပီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းချထားတာပေါ့။ အိရဲ့တံတွေးတွေနဲ့
စိုရွှဲနေတဲ့ လီးကြီးကို မနှိုးမဆွရသေးတဲ့.စောက်ဖုတ်လေးထဲ မညှာမတာထိုးထညိ့တာပါပဲ။
အိ ကို အနည်းဆုံးတော့ ပွတ်ပေးမယ်ထင်တာ
ဘာမှတောင် မကလိဘူး။ နို့တောင်မစို့ဘူး။
အိမွာ စိတ်ထလို့ အရည်ကြည်နဲနဲထွက်ရုံပဲရှိတာ။ အဖုတ်မဖောင်းသေးဘူး။ နာတာပေါ့။
ဆိုပြီးအော်ကာမှ သူက အိခါးကိုကိုင်ပြီး
ဆောင့်ချလိုက်တာ ဗြစ်ခနဲ မြည်ပြီး ဝင်ချသွားတယ်။ ခေါင်းထဲ မိုက္ခနဲ ဖြစ်ပြီး မျက်ရည်တွေပါကျတယ်။ နာလွန်းလို့။ ခနလောက် ဆွံ့အသွားပြီး
ပြီးမှ တအီးအီးနဲ့ငိုမိတာပါပဲ။ အိငိုနေတာကို
ထည့်ထားတယ်။အဆုံးထိပဲ…။သု့လီးကြီးကလည်း အိငိုနေမှ ပိုကြီးလာတာလား။ အိအဖုတ္ကပဲ ကျုံ့လာတာလား။ မသိတော့ဘူး။ဒါကိုသူက
“မငိုနဲ့ သော်တာလေး တိတ်တိတ်..အသက်ဝဝရှု လိုးတော့မယ်နော်”
ဆိုပြီး အဆုံးထိဝင်နေတဲ့လီးကြီးကို မထုတ်ပဲ
စကောဝိုင်းလှည့်နေတယ်။ ပြဲနေတဲ့နေရာတွေကိုထိရင် တွန့်ခနဲ ဖြစ်ပြီးစပ်လိုက်နာလိုက်တာ။
လူကောင်လည်းကြည့်ပါဦး။ သူ့အရပ်က ခြောက်ပေနားရှိတယ်။ အိက ငါးပေတိတိ။ ဖင်လုံးကြီးပေမယ့် ရင်သားကသိပ်မကြီး။မျက်နှာချောတာလေးပဲရှိတာ။
အိအခုလို ငိုကြီးရှိုက်ငင်ဖြစ်နေတာကို သူက အရသာခံကြည့်နေတာ။ပြီးတော့ နှယ်နေတာ
“ကြည့်ပါလားကွယ့်သော်တာလေးက မုဒိမ်းအကျင့်ခံရတာကို ဖီလ်းတာတကယ်ပဲ။ ကိုယ်ဖြင့်
သူပြောကာမှ ကိုယ်လဲ ပိုထန်လာမိတယ်။ အဖုတ်ထဲအရမ်းယားနေပြီ အရည်လည်းအတော်ထွက်နေပြီ။ ဖင်ကလည်း သူမွှေသလို လိုက်မွှေနေမိတယ်။ ပါးစပ်ကလိုးပေးပါမပြောရုံတမယ်ပဲ။
“သော်တာလေးက ငွေလိုလို့ ဖာခံတာမွမဟုတ္တာ။ ဖင်ယားနေလို့ ပတ်ခံနေတာပဲ။”တဲ့။
အမေလး ရှက်လိုက်တာ။ ရှက်လို့လား ကောင်းလို့လားနာလို့လားမသိ မျက်ရည်တွေစီးနေသလောက် အဖုတ်ကလည်းအရမ်းယားနေပြီ။အခုချိန် သူ့လီးကြီးဆွဲမနှုတ်သွားအောင် အတင်းဖိကပ်ပြီး ဖြစ်ညှစ်ထားမိတယ်။
ရင်ဘတ်ထဲ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားတာ။..တကယ်။
ဖင်ကြီးတကြွကြွနဲ့ပါသွားတာ။ ပြီးတာနဲ့သူက အိကို
ကြည့်ပါဦးပြောပုံက အိကို အရမ်းထန်နေအောင်
လုပ်ပြီးကာမှ လိုးမေပးပဲ ထုမယ်တဲ့။
ထြက္လာတဲ့စကား။ဒါကိုသူက ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ရင်း ဘယ်ကိုလိုးကမှာလဲ ဆိုပြိးမေးတယ်။
ဒီတော့မှ သူကလည်း လီးကြီးထည့်ရင်း အားပါးတရဆောင့်ပေးတော့တာပဲ။ ကောင်းလိုက်တာ
ကောင်းလိုက်တာ.. မိနစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း နှစ်ချီပြိးသွားတယ်။ သူကမပြီးသေးဘူး ဆက်ဆောင့်နေတယ်။ နာရီဝက်…မပြီးသေးဘူး။ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ကြာလာတယ် မပြီးသေး။
အဖုတ္က ပူနေပြီ။ အထဲကနာနေစပ်နေပြီ။
မပြီးသေးဘူး။ သူကမညှာဘူး။ ဆက်လိုးနေတုန်း မောရင်အရှိန်လျော့တယ်။ ပြီးရင်ဆက်လိုးတယ်။ အိစောက်ဖုတ်ထဲ အတော်ခံရခက်တယ်။
ပူပူကြီးနဲ့ နာနေတာပဲရှိတယ်။ သူကလည်း
တစ်နာရီကျော်ပြီ မပြီးဘူး။လိုးနေရင်းအိငါးမိနစ်တိတိ သတိပါမေ့တယ်။ သူကလိုးနေတုန်း။ ည ၇ခွဲတော့မှ လီးကိုဆွဲချွတ်ပြီး အိမျက်နှာခွ ဂွင်းထုတာ လရည်တွေ အိရဲ့သနပ်ခါး ကျိုးတို့ကျဲတဲ့ ပါးပြင်မှာ
ပေကုန်တာပေါ့။ အိလည်း မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။
ဒါကိုသူက အတင်း အကျီပြန်ဝတ်ခိုင်းတယ်။
အိလည်း ဝတ်ရတာပဲ။ နောက်ကျနေပြီလေ။
လမ်းထိပ်ကနေ အိမ္ကို ပြန်ရတာ
လှမ်းလိုက်တိုင်း နာနေတာ တော်တော်ဆိုး။
အိမ်ရောက်တော့ စောင့်နေတဲ့အမေကိုတွေ့တယ်။ အေမက ဘာမှတော့မပြောဘူး။ထမင်းစားဦးတဲ့။
သတိရတာနဲ့ မစားချင်ပေမယ့် အမေစိတ်ချမ်းသာအောင် စားပေးရတာပဲ။ စားနေတဲ့အချိန်
တခါတခါပူစပ်နေတုန်း။ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာတော့ ငွေငါးသောင်းနဲ့။ မနက်ဖြန်ဈေးဖိုးနဲ့ သဘက်ခါ အကြွေးတော့ပေးနိုင်ပြီလေ..။ ။
သမုဒယ ပစ္စယာ ဒုက္ခ
"အတွင်းတွင် ဘာမှမရှိသော သစ်အယ်သီးပင် အခွဲခံရသော် "ခွက်" ဟူ၍    အသံပြုတတ်သေးရာ အသိဉာဏ်ရှိသော
မိမိတို့၏ သေဆုံးရခြင်းအပေါ် လွန်စွာအလေးဂရုအပြုခံလိုကြသည်။”ဤကား နီရှေး၏အဆိုအမိန့်ပင်တည်း။
မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းနောက်တွင် ပြူတစ် ပြူတစ်လုပ်၍
နွေးထွေး လင်းသန့်သော ရောင်ခြည်ဝါများဖြင့်
လန်းဆန်းစေသည်။ ကားဟွန်းသံ၊ ဆိုင်ကယ်ကို
လီဗာ ခပ်ပြင်းပြင်းဆွဲသံ၊ လောင်းကစားဝိုင်းများ၊
ပြီတီတီမျက်နှာများ ၊ ဒီနေ့၏ အလုံးကြီးကျပြီး
ကာလသုံးပါးကို ဂရုမစိုက်ပဲ အရက်ဆိုင်ထဲ
လည်ပတ်နေသော လှိုင်သာယာမြို့တော်ကြီး၏ ညနေခင်းသည် စိတ်ဝင်စားစရာအပြည့်။
တီရှပ်အဖြူ ထဘီအပြာနှင့် တစ်ယောက်တည်း
ကွဲထွက်နေသည့် ချစ်သူကိုမြင်ရတော့ ဟန်မင်း
“အိ… ဘာလို့ဖုန်းမကိုင်တာလဲ။ ကိုကြီးဖုန်းကို
ဘာလို့ ဘေလာ့ထားတာလဲ။ အဲ့လို ဖြတ်လို့
မထင်မှတ်ထားသောအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ထားသောသူကိုတွေ့ရသောကြောင့် ဆွဲခြင်းလေးပင်
အနီးနားက တက္ကစီကိုတားကာ ထွက်သွားသော
ကောင်လေးကို ရှောင်ချင်စိတ်ဖြင့်သာ ဟိုလူ့
“ဟုတ်တယ် ကိုကြီး၊ ဒီည အိမ်မပြန်ချင်တော့ဘူး။ အမေ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ဦးမယ်။”
အေမ့ကို ဒီနေ့ ညဆိုင်းပါထပ်ဆင်းမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောတော့ အေမက ဆူပါတော့သည်။ အမေဆူသည်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး
အသင့်စောင့်နေပုံရတဲ့ ရှပ်အကျီအဖြူနဲ့ ဗိုက်ပူပူလူကြီးကို တက်ကစီဆရာက ဆင်းပြီး
စကားတွေပြောနေပုံရသည်။မကြာခင်မှာပဲပြန်လာပြီး အိကိုအကျိုးအကြောင်း ပြောပြသည်။
“သော်တာရေ..နိုက်ကို တစ်သိန်းခွဲနဲ့ ညှိပေးခဲ့တယ်။ မကြောက်နဲ့နော်။အေးဆေး။”
သူ့ဆီသွားတော့ အဘိုးကြီးက သူ့ကားပေါ်မှာ
ဆွဲခြင်းရောထားပြီး ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ ဖုန်းလေးသာ ပါလာသည်ပေါ့။
တည်းခိုခန်းထဲရောက်တော့ ဘိုးတော်က အချိန်မဆွဲဘူး။ အိပ်ရာပေါ်ပစ်လှဲလို့ သူ့ရဲ့
စတိုင်ပင်ကို ဆွဲချွတ်ချပြီး လီးစုပ်ပေး
ရင်ထဲတော့တမျိုးကြီး။ အဘိုးကြီးက အသက်၆ဝ
အာခေါင်တွေပါခြောက်လာတယ်။သူ့လီးက မာမလာဘူး။ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်စုပ်ပြီးတော့
” ပါးစပ်ကိုလိုးမယ်နော် သမီး”
ဆိုပြီး အိရဲ့ ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလေးအောက်က
လက်နောက်တစ်ဖက်က အိရဲ့ခေါင်းကို ကိုင်၊
တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖင်ကိုလိုးသလို ပါးစပ္ကို
လိုးတာပေါ့။ အိပါးစပ်ထဲ လီးကြီးဝင်ထွက်နေတာ စိတ်ထဲ လုံးဝမသန့်ဘူး။ ခါတိုင်းစုပ်ပေးယက်ပေးဖူးပေမယ့် ပါးစပ်ကိုလိုးတာကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ။ အဲ့တော့ ပျို့တက်လာတယ်။ ဗိုက်ထဲ အစာမရှိတော့ ပိုမောသလိုပဲ။ အဘိုးကြီးပေါင်ကြား
ခေါင်းတိုးဝင်ရင်း ပါးစပ်ကို ဖင်လိုးသလိုအလိုးခံနေရတဲ့အချိန် အိရဲ့ကောင်လေး ဟန်မင်းထက်ကတော့ အဲ့တည်းခိုခန်းနားက ဘီယာဆိုင်မှာ တခွက်ပြီးတခွက်သောက်နေတာ…အငမ်းမရ။
ိုးကြီးက အိပါးစပ်ကိုလိုးလို့ဝတော့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ လီးကိုထိုးထည့်သည်။
မညှာမတာပါပဲ။ နျှုိးဆှပေးခွငျးမရှိ၊ အစိလေးကိုတောင် မပွတ်ပေး။ အိခမ်ာ မျက်နှာကြီး
ရှုံ့မဲ့အောင် နာကျင်ခံစားနေရသည်။ ဒါကို
အဘိုးကြီး၏ မုဒိမ်းကျင့်မှုကြောင့် နာကျင်နေသော်လည်း စိတ်ထဲတွင်တော့ ကျေနပ်နေသလို၊
အိကိုသူ စိတ်တိုင်းကျ ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့
ညရှစ်နာရီထိုးနေပြီ။ထိုစဉ် တီတီတီ နှင့်
သူ့လက်ကိုင်ဖုန်းလေးမှ ဖုန်းဝင်လာသောကြောင့် လိုးလက်စကြီးကို ဆက်မလုပ်ပဲ လီးကိုစိမ္ထားကာ ဖုန်းပြောနေသည်။
“အိုကေ အိုကေ၊ အကိုခုလာခဲ့မယ်။”
“အကို့ စက်ရုံတစ်ခု မီးလှန့်လို့တဲ့ ။ ခဏသွားကြည့်ဦးမယ်။ ညဆယ်နာရိလောက်ပြန်လာခဲ့မယ်။ရော့ တစ်သိန်း။ မနက္က်မွ တစ်သိန်းထပ်ယူ။”
ပြောပြောဆိုဆို လီးကြီးဆွဲထုတ်ပြီး အကျီဝတ်ကာ
အဝတ်လေးတွေ ဝတျပွီး အခန်းသော့အပ်လို့
စားဦးမှဆိုပြီး မှာနေတုန်း ဟန်မင်းထက်နဲ့တိုး.
ခေါက်ဆွဲကြော်ယူပြီး မပြေးရုံတမယ် တည်းခိုခန်းထဲဝင်လာခဲ့သည်။ အခန်းထဲရောက်လို့
ဗိုက်ထဲ ခေါက်ဆွဲတပွဲဝင်သွားတော့ နည်းနည်း
မှေးချင်လာသည်။ ထိုစဉ်တောင်ခနဲ မက်ဆေ့
ဖုန်းကိုပိတ်ရင်း အိပ္ခ်လိုက္တာ အတော်ကြာတယ်ထင်ရတယ်။ အခန်းတံခါးလာခေါက်မှ
ဟိုလူကြီး။ အချိန်က ညဆယ့်နှစ်နာရီထိုးနေပြီ။
“တေ်ာသေးတယ် မီးမကူးဘူး။ အချိန်မီသွားလို့။”
“ကဲ… ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်။ သမီးလည်းမချိုးရသေးဘူးမလား။ လာလာ တူတူချိုးကြတာပေါ့။”
ရေနွေးနဲ့ သေချာချိုးရတော့ ပထမ ရှက်သလိုလို ဖြစ်ပေမယ့် အကြောအချဉ်တွေပြေ လန်းဆန်းလာပြီး စိတ်လည်းနည်းနည်းကြွလာမိသည်။
အိက စိတ်ကြွတုန်းရှိသေး သူ့ရဲ့ ပစ္စည်းကြီးက
ဆပ်ပြာရည်ကို လက်ဝါးပေါ်တင်ပြီး လိင်တံကို
သေချာ တိုက်ချွတ်ပေးရင်း ဂွင်းထုပေးတော့
ကြာကြာဇိမ်မယူ…အိကို ရေချိုးဇလုံထဲပလက်လှန်ခိုင်းပြီး ဆပ်ပြာတွေနဲ့ အမြုပ်ထနေတဲ့ လီးတံကြီးကို ကိုင်ရင်း သေချာကြည့်ကာ ဂွင်းထိုင်ထုနေပါတော့သည်။ ချောမောပြေပြစ်သော အိသင်ဇာရဲ့ မျက်နှာလေး၊ ဖြူဝင်းသောအသားအရည်၊
ရှက်ရွံ့နီရဲနေသော ပါးအို့အို့လေး၊ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေသော ခန္ဓာကိုယ်၊ အားလုံးကို အရသာခံရင်းသေချာဂွင်းထုနေတဲ့အသံ တဖတ္ဖတ္က
အိလည်း စိတ်ပါလာပြီး အဖုတ္ကို ပွတ်ပြနေမိသည်။ လက်ခလယ်ထိုးထည့်ပြတော့ သူအတော် ကျေနပ်သွားသည်ထင်ရဲ့ အရှိန်မြန်လာ၏။
အိရေဇလုံထဲက ရေတွေက ဘောင်ဘင်ခတ်နေပြီ မတ်တပ်ရပ်နေသော သူကလည်း တဖြည်းဖြည်း အိမျက်နှာနား လီးတံကွီးတိုးလာ၏။
အိရဲ့ ပါးနုနုလေးကို လီးနဲ့ဖိထိုးတော့ အိလည်း
အ…အ….အ. နဲ့ ပြီးသွားမိသည်။ အိပြီးတာမြင်တော့သူ့လရည်တွေကို မျက်နှာတစ်ခုလုံး
ပေ သွားအောင် ပန်းထုတ်ချလိုက်ပါတော့သည်။ ဟန်မင်းထက်ကတော့ မက်ဆေ့ပို့လို့ကောင်းတုန်း။
မနက်ခင်းရဲ့နေရောင်ခြည်က လိုက်ကာတွေကို တိုးမဝင်နိုင်ပေမယ့်
အခန်းလေးကို ပြပြကလေး လင်းစေ၏။
နိုးနိုးချင်းသတိရမိတော့ ကိုယ့်မှာ အဝတ်အစားမပါ၊ ညက ဘယ်လောက်တောင် ပြဲ ကြမ်းခဲ့ကြလည်း ပင်မမှတ်မိတော့၊ ရေချိုးပီးပီးချင်း
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဘယ်လောက်သောက်လိုက်တယ်မသိဘူး၊ ဘာမှမမှတ်မိ။ အတော်ပွဲ ကြမ်းခဲ့တာတော့ အေသအခ်ာ။ ခေါင်းအုံးတွေကလည်း ကြမ်းပြင်မှာ စောင်ကလည်း တူတူပဲ။ အဘိုးကြီးကတော့ အိကို ဖက်ထားတယ်။ အိတကိုယ်လုံး
တဆစ်ဆစ်နာနေဆဲ။ အဝတ်အစားတွေကလည်း တောင်တစ်ခု မြောက်တစ်ခု။ ကွန်ဒုံးအဟောင်း လေငါးခုတောင်တွေ့ရသည်။
ဘိုးတော်ကနိုးလာပြီး အိကို တယုတယနမ်း၏။
“သိပ် ချစ် ဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးမ၊ ငါးသောင်းမုန့်ဖိုးပိုပေးခဲ့မယ်။ တစ်သိန်းယူ။နောက်လည်း
ကောက်ဝတ်လို့ ပိုက်ဆံတစ်သိန်းထုတ် ပစ္ခ်ကာ။
“လိုက်မပို့တော့ဘူးနော်။ တက္ကစီနဲ့ပဲ ပြန်လိုက်တော့။ ဒီနေ့တစ်ရက်စာပါ ရှင်းပေးခဲ့တယ်။
သူ့ပစ္စည်းတွေသူယူကာ ပြန်သွားတော့ အိခမ်ာ ထဖို့တောငိအနိုင်နိုင်။ သန့်စင်ခန်းထဲသွားပြီး အပေါ့သွားဖို့တောင်လမ်းမလျောက်နိုင်ဘူး။
ကွတကွတနဲ့။ ခနေနေတာ့ အဝတ်အစားလေးတွေ ပြန်ဝတ်ပြီး ဟောက်စ်ကိပင်းခေါ်ရှင်းခိုင်းတယ်။ ကိုယ္က မလှုပ်နှိုင် ဆိုဖာပေါ်ထိုင်နေရတုန်း။ ဟောက်စ်ကိပင်းကောင်လေးက ကွန်ဒုံးတွေသိမ်း တံပတ်တွေ အဝတ်တွေ ခါ။ လောင်ဒရီထဲ
ထည့်ရမှာတွေ သိမ်း။ အကုန်ပြီးတော့ ငိုင်နေတဲ့
ကျောမှီလှဲရင်းနဲ့ အနားယူနေရင်း အသက္ကို
စာပြန်ပို့ရင်း ဖုန်ကိုပါဝါပိတ်လို့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက နှစ်သိန်းအုပ်ကို ကိုင်နေမိတယ်။
ရပ်ကွက်ထဲရောက်ရောက်ချင်း ဒေါ်မြင့်ကြီးတို့အိမ်ကိုပဲသွားလို့ ကျန်တဲ့ နှစ်သိန်းခြောက်သောင်းမှာ နှစ်သိန်းဆပ်လိုက်တယ်။ ဒေါ်မြင့်ကြီးပြီးရင်
အမက တခြားသူတွေကို အကြွေးဆပ်ဖို့
တာဝန်ယူထားတယ်။ ကိုယ်က နောက်ထပ်
တစ်ယောက်ပဲဆပ်ရတော့မယ်။တစ်သိန်းပဲလေ။ လစာထုတ်ရင် ဆပ်နိုင်ပါပြီ။ဒီအလုပ်ကိုလဲ နားရမလား…မနားရဘူးလား။ အပြန်လမ်းမှာ စဉ်းစားနေမိတာပဲ။ စုမိဆောင်းမိမရှိသေးတော့လဲ….
“ကိုကြီး…သေ်ာတာ.ပါ…..။.. ဟုတ်..ဟုတ်.. အဆင်ပြေတယ်။ သမီးတစ်ရက်လောက်နားမလို့။ သဘက်ခါမှချိန်းပေးနော်။
ပြောပေးထားပေါ့။ ဟုတ်…တစ္ခြဲပါပဲ။ မနက်၉
ည၄ပေါ့။ ဟုတ်..ကျေးဇူးကိုကြီး။ ဒါပဲနော်။”
ဖုန်းကိုချရင်း အိမ်နားရောက်တော့ ခပ်တည်တည်လမ်းလျောက်လာတာပဲ။ အေမကေတာ့
အိမ်ရှေ့မှာ ဆေးပေါ့လိပ်ကြီးဖွာရင်း သမီးကို
မြင်တော့ စိတ်ထဲကအလုံးကြီး ကျသွားပုံပါပဲ။
“ထမင်းကြော်ထားတယ်။ စားဦး မပူခင်လေး”
“ဟုတ်..အေမ။ ဒီလပါပဲ ပြီးရင် အကြွေးကြေပြီ။”
“အေးပါ…စားဦး ပြီးမှ ရေမိုးချိုးပြိးနားတော့။
ရှကျပွီး တ ရွေ့ ရွေ့ ထွက်သွားတယ်။
အိမ်မှုကိစ္စလုပ်၊ ရေမိုးချိုးလို့ တေရးတမော
အိမ်တံခါးကို ပိတ်ပါရဲ့ အရှေ့တံခါးပဲ